Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Trent Alexander-Arnold Child Story Story na-emeghe akụkọ ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Ịkụ gọlfụ". Anyị Trent Alexander-Arnold Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe ọmụma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya nwere ikike mana mana ole na ole na-ele Trent Alexander-Arnold's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Trent Alexander-Arnold nke ụmụaka - mmalite ndụ na ezinụlọ:
Trent John Alexander-Arnold mụrụ na Thbọchị 7th nke Ọktoba 1998 na West Derby, ụlọ nke ụlọ egwuregwu Liverpool Football Club, Melwood, Liverpool, United Kingdom.
Trent Alexander-Arnold toro na ụmụnne ya abụọ, Tyler na Marcel. Mmadụ atọ n'ime ha ji oge awa ọ bụla na-egwu bọl mgbe ha na-etolite n'ezinụlọ ha na West Derby. Ọ bụ Trent nke mesịrị mechie football dị ka ọrụ ọkachamara.
O sonyeere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Liverpool na 2004 mgbe ọ dị afọ isii mgbe onye isi ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ hụrụ ya bụ Ian Barrigan.
Ebe ọ bụ na ọ bụ onye kachasị egwu n'òtù ndị ntorobịa ya, Alexander-Arnold ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ Liverpool na-eme oge ụfọdụ na-arụ ọrụ dị egwu nke na-esi n'olulu ahụ apụta n'abalị ahụ dị ka onye isi Jamie Carragher. Foto dị n'okpuru ebe a dị na 2009 mgbe Liverpool zutere Eeds Cup na nkeji iri na anọ na Leeds.
O tolitere na ntorobịa ntorobịa wee gaa na onyeisi Liverpool U16 na U18. Trent nwere ọganihu n'oge ya na agụmakwụkwọ na na 2015, bụ onye akụkọ Liverpool mbụ họọrọ Steven Gerrard, bụ onye nyere ya ohere inwe ọdịnihu dị mma na ụlọ osisi ahụ na akụkọ ọdịyo ya
Trent mere onye izizi mbụ ya maka klọb na 2016, dị afọ 18. N'afọ sochirinụ, ọ meriri klọb Young Player of the Season award. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ ugbu a ọdịnihu.
Trent Alexander-Arnold Ndụ nke Onwe:
Trent nwere àgwà na-esonụ na àgwà ya.
Ike Trent Alexandar-Arnold: Ọ bụ onye na-akwado, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, onye amara na onye ezi uche.
Adịghị ike Trent Alexandar-Arnold: O nwere ike inwe obi abụọ ma na-atụ ụjọ esemokwu. Trent ga-eburu onwe ya iwe na iwe.
Ihe Trent Alexandar-Arnold nwere mmasị: Ọ hụrụ nkwekọ, ịdị nwayọọ, ịkọrọ ndị ọzọ na n'èzí.
Ihe Trent Alexandar-Arnold achọghị: Ime ihe ike, ikpe na-ezighị ezi, ụda olu, nkwenye.
n'ozuzu, Trent Alexandar-Arnold nwere udo, dị mma, ma ha kpọrọ asị ịnọ naanị ha. Ọ bụ onye dị njikere ime ihe ọ bụla iji zere esemokwu na ịdo udo mgbe ọ bụla o kwere omume.
Trent Alexander-Arnold Biography Eziokwu - Enyi na Steven Gerrard:
Dị ka e kwuru na mbụ, ọ bụ Steven Gerrard bụ ndị na-agbanye bọtịnụ na njikwa Liverpool na-ahụ kpakpando na-eto eto na-abịa na-egwuri egwu na Anfield. N'okpuru ebe a bụ foto nke obere Trent Alexander-Arnold na onye nkụzi ya, Steve G.
Trent Alexander-Arnold Hụrụ Ndụ Ndụ:
Trent gosipụtara na inwe onye ọlụlụ dị ezigbo mkpa maka ya n'agbanyeghị na ọ na-eme mmekọrịta ya na nzuzo. Trent Alexander-Arnold edebewo ndụ nke onwe ya nke onwe ya na nke ọhụụ n'ihi na ọ dị obere ịmalite ndụ Wag.
N'ezie, ọ naghị ekwukarị banyere ndụ onwe ya na mgbasaozi na ọha na eze. Ọ na-ahọrọ ilekwasị anya na ọrụ ya na Liverpool kama ndụ ya. Trent Alexander-Arnold nwere enyi nwanyị na-enwe mmekọrịta siri ike mana o jisiri ike na-ewetu ya ala nke na ọ nwere ike ịlụ di na nwunye ugbu a.
Ezigbo Alexander-Arnold Ezinụlọ:
Nke mbụ sitere na nna na-etiti nna ya na-etiti tupu ya emechaa kwụọ ụgwọ.
O kpughere otu mgbe nne ya bere ákwá mgbe ọ matara na nwa ya nwoke amalitela Liverpool megide Manchester na nke mbụ ya. Aha Manchester United na-akpọ nne ya mgbịrịgba. Nke a bụ n'ihi na nne nne Alexander-Arnold, Dooreen Carling (nne nne ya), bụbu enyi nwanyị nke onye njikwa United oge mbụ, Sir Alex Ferguson. Otú ọ dị, ọ gwara ya ka ọ gaa n'ihu ma nye ihe kasị mma o mere. Egwuregwu ahụ gwụrụ na ntanye.
NDỊ BỤ: Alexander-Arnold nwere ụmụnne nwoke abụọ, Tyler na Marcel rụrụ nnukwu ọrụ na mmepe ya dịka onye ọkpụkpọ egwuregwu bọọlụ. Trent a nwere ekele.
N'okwu ya ...“Echere m na ha abụọ nyeere m aka ịzụlite nkà ndị m na-amachaghị na m na-etolite n’oge ụfọdụ n’oge m na-etolite. Anọ m na-arụ ọrụ n'ihe m na-aghọtaghị, m na-ekpori ndụ.
Ma n'otu oge ahụ, ọ nọ na-arụ ọrụ ma na-agbasi mbọ ike n’amaghị ama. Echere m na ọtụtụ ihe ga-adakwasị ha maka otu m dị ugbu a. ” N'okpuru ebe a bụ Alexander-Arnold na nwanne ya nwoke okenye bụ Tyler.
Trent nwere nwa nwanne nwoke bụ onye bụbu onye na-agụ egwuregwu na ndị na-egwu egwuregwu Millwall, na onye bụbu odeakwụkwọ ọgbakọ Manchester United John Alexander.
N'èzí football, Alexander-Arnold na-arụ ọrụ afọ ofufo dịka onye nnọchianya na-ewepụta otu awa nke ụbọchị ya maka ndị na-enweghị atụ nke obodo. Ọtụtụ mgbe, ọ na-enye ha nri, ihe eji egwuri egwu na ihe mmụta sayensị.
Ọ kwadoro ọrụ ebere ahụ kemgbe nne ya kpọbatara ya mgbe ọ dị afọ iri na ụma, yana oge ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Liverpool, ya na onye otu ibe ya Kris Owens kwere nkwa inye nkwado ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ha mere ya dị ka ndị na-agba ọsọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Alexander-Arnold Nwatakịrị Na-akọ akụkọ ọzọ akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.